Mpata Da (1-34)
16 Bere a Aaron mma baanu no amfa ɔkwampa so amma Yehowa anim a enti wowuwui no,+ akyiri yi, Yehowa ne Mose kasae. 2 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ wo nua Aaron sɛ ɔrentumi mma kronkronbea hɔ na onwura mu nkɔ ntwamutam no akyi+ wɔ Adaka no mmuaso anim bere biara a ɔpɛ,+ anyɛ saa a obewu,+ efisɛ meyi me ho adi omununkum mu+ wɔ mmuaso no+ so. 3 “Sɛ Aaron ba Kronkron Mu Kronkronbea hɔ a, nea ɛsɛ sɛ ɔde ba ni: nantwinini kumaa a ɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre+ ne odwennini a ɔde bɛbɔ ɔhyew afɔre.+ 4 Ma ɔnhyɛ nwera ataade tenten kronkron no,+ na ɔnhyɛ nwera nika*+ nkata ne ho. Na ɔmfa nwera a ɔde bɔ ne mu no+ mmɔ so, na ɔmmɔ nwera abotiri no.+ Ɛyɛ ntaade kronkron.+ Ɔmfa nsu nguare+ ansa na wahyɛ. 5 “Onnye mpapo nkumaa abien mfi Israel asafo no+ hɔ mfa mmɔ bɔne ho afɔre, na onnye odwennini baako mfa mmɔ ɔhyew afɔre. 6 “Afei ma Aaron mfa nantwinini a ɔde bae no mmɔ bɔne ho afɔre mma ne ho,+ na ɔmpata mma ne ho ne ne fi. 7 “Owie a, ɔmfa mpapo abien no mmra Yehowa anim wɔ ahyiae ntamadan no kwan ano. 8 Ma Aaron mmɔ mpapo abien no so ntonto nhu nea ɔde bɛma Yehowa ne nea ɔde bɛyɛ Asasel* ɔpapo. 9 Aaron mfa ɔpapo a ntonto no beyi no+ ama Yehowa no mmɔ bɔne ho afɔre. 10 Ɔpapo a ntonto no beyi no sɛ Asasel ɔpapo no de, ɔmfa no mmegyina Yehowa anim animono, na wonkogyaa Asasel ɔpapo no wɔ sare so, na ama nkurɔfo no anya bɔnefakyɛ.+ 11 “Ma Aaron mfa nantwinini a ɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre ama ne ho no mmra, na ɔmpata mma ne ho ne ne fi. Ɛno akyi no, onkum nantwinini a ɔde rebɔ bɔne ho afɔre ama ne ho no.+ 12 “Afei afɔremuka a ɛwɔ Yehowa anim no, onyi nnyansramma a ɛwɔ so no bi ngu kankyee a wɔde ogya gu mu mu,+ na ɔmfa aduhuam a wɔasiw no muhumuhu+ nsa ma abien nka ho nwura mu nkɔ ntwamutam no+ akyi. 13 Ɔmfa aduhuam no ngu gya no so wɔ Yehowa anim,+ na aduhuam wusiw kumɔnn no nkata Adanse Adaka+ mmuaso no+ so. Ma ɔnyɛ saa na wanwu. 14 “Ma ɔmfa ne nsateaa mmɔ nantwinini no mogya+ mu mpete mmuaso no anim baabi a ɛhwɛ apuei fam no; ma ɔmfa mogya no mpete mmuaso no anim mpɛn ason.+ 15 “Onkum ɔpapo a ɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre ama ɔman no,+ na ɔmfa ne mogya+ no nwura mu nkɔ ntwamutam no akyi,+ na ɔnyɛ nea ɔde nantwinini no mogya yɛe no ara bi. Ɔmfa mpete mmuaso no anim. 16 “Israelfo nneyɛe a ɛho ntew, wɔn mmarato, ne wɔn bɔne nyinaa+ nti, ma ɔmpata mma kronkronbea no. Saa na ɔnyɛ ahyiae ntamadan a ɛwɔ Israelfo a wɔn ho ntew no mfinimfini no. 17 “Sɛ ɔkɔ Kronkron Mu Kronkronbea hɔ kɔbɔ mpata afɔre a, ɛnsɛ sɛ obiara kɔ ahyiae ntamadan no mu kosi sɛ ɔbɛba. Ma ɔmpata mma ne ho ne ne fi+ ne Israel asafo nyinaa.+ 18 “Afei ɔmmra afɔremuka+ a ɛwɔ Yehowa anim no ho na ɔmpata mma afɔremuka no. Ɔmfa nantwinini ne ɔpapo mogya no bi nyɛ afɔremuka no mmɛn no biara ho. 19 Bio nso, ɔmfa ne nsateaa mmɔ mogya no mu na ɔmfa mpete so mpɛn ason, na ɔntew ho mfi Israelfo nneyɛe a ɛho ntew ho, na ɔnyɛ no kronkron. 20 “Sɛ ɔpata ma Kronkron Mu Kronkronbea no ne ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no wie a,+ ɔmfa ɔpapo a ɔte ase no mmra.+ 21 Aaron mfa ne nsa abien ngu ɔpapo no apampam, na ɔnka Israelfo mfomso nyinaa, wɔn mmarato nyinaa, ne wɔn bɔne nyinaa ngu ɔpapo no ti so,+ na ɔmfa no mma ɔbarima a wɔapaw no sɛ ɔmfa no nkɔ no,* na onkogyaa no wɔ sare so. 22 Ma onnyaa ɔpapo no wɔ sare no so, na ɔpapo no nsoa wɔn bɔne nyinaa+ nkɔ sare no so.+ 23 “Afei Aaron nkɔ ahyiae ntamadan no mu na onyi nwera ntaade a ɔhyɛ kɔɔ Kronkron Mu Kronkronbea hɔ no, na onnyaw wɔ hɔ. 24 Ɔmfa nsu nguare*+ wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron, na ɔnhyɛ n’asɔfotaade;+ afei ompue mmɛbɔ n’ankasa hyew afɔre+ ne ɔman no hyew afɔre.+ Na ɔmpata mma ne ho ne ɔman no.+ 25 Ɔnhyew mmoa a ɔde rebɔ bɔne ho afɔre no srade wɔ afɔremuka no so. 26 “Ɔbarima a okogyaa Asasel ɔpapo+ no nso nhoro ne ntaade na ɔmfa nsu nguare ansa na waba asoɛe hɔ. 27 “Afei nantwinini ne ɔpapo a wɔde bɛbɔɔ bɔne ho afɔre a wɔde wɔn mogya kɔpatae wɔ Kronkron Mu Kronkronbea hɔ no, ma wɔmfa nkɔ asoɛe no akyi, na wɔmfa ogya nhyew wɔn nhoma, wɔn nam, ne wɔn bin.+ 28 Nea ɔbɛhyew mmoa no, ma ɔnhoro ne ntaade na ɔmfa nsu nguare ansa na waba asoɛe hɔ. 29 “Eyi bɛyɛ ahyɛde a mubedi so daa: Bosome a ɛto so ason no da a ɛto so du no, munni awerɛhow,* na kuromanni oo, ɔhɔho a wabɛsoɛ mo mu oo, mma obiara nnyɛ adwuma biara.+ 30 Saa da yi na wɔbɛpata ama mo+ de atew mo ho. Mo ho bɛtew afi mo bɔne nyinaa ho wɔ Yehowa anim.+ 31 Ɛyɛ homeda a mode bɛhome koraa, na ɛsɛ sɛ mudi* awerɛhow.+ Ɛyɛ ahyɛde a mubedi so daa. 32 “Ɔsɔfo a wɔbɛsra no+ ahyɛ no sɔfo*+ ma wasi ne papa ananmu+ no, ɔno na ɔbɛbɔ mpata afɔre no, na wahyɛ nwera ntaade kronkron no.+ 33 Ɔmpata mma Kronkron Mu Kronkronbea no,+ ahyiae ntamadan no,+ ne afɔremuka no,+ na ɔmpata mma asɔfo no ne Israel asafo nyinaa.+ 34 Eyi yɛ ahyɛde a mubedi so daa,+ na afe biara mobɛpata ama Israelfo bɔne nyinaa pɛnkoro.”+ Enti ɔyɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no pɛpɛɛpɛ.
^ Ebetumi aba sɛ ɛkyerɛ “Apɔnkye a Wonhu N’akyi Kwan Bio.”
^ Anaa “ɔbarima a wayɛ krado no.”
^ Nt., “Ɔmfa nsu nguare ne honam.”
^ Anaa “mo kra di.”